Wasiir dowlaha Maaliyadda Puntland oo kulan la qaatay Shaqaalaha Wasaaradda (Sawirro) – Wasaaradda Maaliyadda
Wasiir dowlaha Maaliyadda Puntland oo kulan la qaatay Shaqaalaha Wasaaradda (Sawirro)
September 1, 2021	in Warka
GAROOWE – Wasiiru dowlaha Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Puntland Mudane Maxamed Cabdiqaadir ayaa shir guddoomiyey kulan looga hadlay dar-dargelinta shaqada Wasaaradda Maaliyadda Puntland.
Kulankan ayaa waxaa kasoo qeyb galay Agaasime Waaxeedyada iyo dhammaan Shaqaalaha Wasaaradda.
Wasiiru dowlaha ayaa soo jeediyey go’aamo ka soo baxay Madaxda Wasaaradda kuna saabsan dar-dar galinta Shaqada ay Shaqaaluhu u hayaan Dowladda iyo Shacabka si ay ku dheehan tahay howlkarnimo iyo karti shaqo.
Wasiirka ayaa kula dar-daaramay shaqaalaha iyo madaxda Wasaaradda in ay ilaaliyaan shuruucda iyo kala danbeynta Shaqada.
Wasaaradda Maaliyadda Puntland oo laga bilaabay qadashadda Tallaalka COVID-19(Sawirro)